४ दिन सम्म सुत्नेबेला एक पोटी लसुन चपाएर सुत्ने गर्नुस यस्ता गज्जबको फाईदा पाउनुहोस ! – Eshankharapur
मुख्य पृष्ठ /Lifestyle/ Health/४ दिन सम्म सुत्नेबेला एक पोटी लसुन चपाएर सुत्ने गर्नुस यस्ता गज्जबको फाईदा पाउनुहोस !
लसुन र एलियम वर्गका तरकारी हरुलाई शक्तिशाली कैंसर प्रतिरोधी तरकारी मानिएको छ। यी वर्गका तरकारी हरूले खस गरेर पेट तथा ठुलो आन्द्रा को क्यान्सर मा विशेष प्रतिकारी भूमिका खेलेको अनुसंधानहरूले जनाएको छ। यी तरकारीमा पाईने तत्वहरूले प्रोस्टेट मुत्रासय ठुलो आन्द्राको र पेटका ट्युमरको वृद्धि लाई मन्द गरेको र रोकेको प्रमाण हरू पनि जुटिसकेको छन्।
लसुन मा पाईने डाईएलाइल डाईसल्फेटले भनिने तत्वले छाला, ठुलो आन्द्रा र छालाको कन्सर हुन नदीन प्रभाबकारी भूमीका निभाएको पायीएको छ भने यो तत्वले प्रयोगसलामा ल्युकेमियाका (रगतको क्यान्सर) कोष हरुलाई समेत नष्ट पार्ने क्षमता पुष्ठी गरेको छ।
त्यसपछि बिहे गर्ने प्रस्ताव पनि मजहरबाटै आयो । मैले त्यसलाई सहर्ष स्वीकार गरें,’ रुजानले भनिन्, ‘मैले पनि आफ्नो घरमा बिहेबारे कुरा गरें र मजहरले पनि नेपालमा आफ्ना आमाबुवासँग बिहेबारे कुरा गर्यो ।’रोजगारी पूरा गरेपछि दुवै जना नेपाल आए । जनकपुरमा मुस्लिम धर्म रीतिरिवाज अनुसार दुवै जनाको ‘निकाह’ भयो । दुवै जनाले २०७० फागुन २६ गते ‘कोर्ट म्यारिज’ गरे ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषामा दुवै जना पुगेर विवाह दर्ता ऐन २०२८ बमोजिम एकअर्कालाई पतिपत्नीको रूपमा ग्रहण गरी मजहर र रुजानबीच विवाह दर्ताको प्रमाणपत्र वितरण गरिएको थियो । मजहर फेरि वैदेशिक रोजगारीमा गए । यसबीच दुवैले छोरी याजी एन्जेला पाए । छोरी एन्जेला अहिले ५ वर्षकी छन् । छोरी भएपछि रुजान जनकपुरमै सासुससुरासँग बस्न थालिन् ।
रुजान नेपालमै जनकपुरमा सासुससुरासँग बस्दै आएका छन् । उनको पेटमा अहिले ५ महिनाको गर्भ छ । पतिको निधन भएपछि अब उनी आफ्नो देश फिलिपिन्स फर्केलिन् कि भन्ने जनकपुरको घर परिवारमा चिन्ता थियो ।तर रुजानले अब जनकपुरमै आजीवन बस्ने निधो गरेकी छन् । मजहरको निधन भएपछि उनले आफ्नो देशको नागरिकता समेत परित्याग गर्दै नेपाली नागरिक बन्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषा पुगेका थिइन् ।
‘मेरो घर परिवार र सारा संसार भनेको यहीँ जनकपुरमा नै छ । अब फिलिपिन्स फर्किने कुरा सोच्नै सकिन्न,’ रुजानले लोकान्तरसँग भनिन्, ‘घरमा सासु, ससुरा, देवर, जेठाजु सहितको सम्पूर्ण परिवार छ । अब यहीँ नेपालमै बसेर आफ्नो छोरीलाई पालनपोषण गर्नेछु ।’ उनले घरमै गृहिणी भएर बस्ने बताइन् । छोराको निधनपछि सासु ससुराले पनि आफ्नो पुरापुरी ध्यान राख्ने गरेको उनले बताइन् ।
बुहारीलाई नेपाली नागरिकता दिलाउन पहल गरेका ससुरा अब्दुल सहमत मोमिनले भने, ‘म आफैं पनि टेलर मास्टर हुँ ।मैले पनि कमाएर बुहारी र नातिनीलाई आर्थिक समस्यामा पर्न दिन्न ।’ उनका अरु २ जना छोरा पनि छन् । जेठो छोरा ३० वर्षीय मोहम्मद अजहरुद्दीनको बिहे भइसकेको छ भने कान्छो छोरा मोहम्मद अथरको बिहे भएको छैन ।
अहिले अस्पताल धाउने अनुकुलता छैन ! त्यसैले घरेलु उपचार खोज्नु उपयुक्त हो !!